JobDescriptionSample.org - စာမျက်နှာ 30 ၏ 99 - ယောဘသည်ဖျေါပွခကျြ၏ကြီးမားစုဆောင်းမှု
Office Clerks, အထွေထွေယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှု Template ကို
Accomplish responsibilities also varied and diversified to be labeled in any distinct office clerical job, requesting understanding of workplace methods and treatments. Paperwork duties may be issued in accordance with work treatments of specific businesses and could addamixture of filing, စာရင်းကိုင်, keying or wordprocessing, stenography unit function, နှင့် …
မင်းသားယောဘဖော်ပြချက် / Tasks ကိုထိုအ Duty နမူနာ
ရုပ်ရှင်ပြပွဲများတွင်ဒေသများခံစားပါ, ရုပ်မြင်သံကြား, ရေဒီယို, ရုပ်ရှင်, အမှတ်, သို့မဟုတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်။ အခြားရွေးချယ်စရာ, အားလပ်ချိန်, သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်. အရေးယူခြင်းဖြင့်ဆွဲဆောင်ရန်လေးနက်သောသို့မဟုတ်လူရွှင်တော်ဖြစ်သောအနေအထားကိုဘာသာပြန်ပါ, နှင့်ပေးတဲ့ dialog, ပရိသတ်ကိုထိပါသို့မဟုတ်အသိပေးပါ. ပါတီပွဲ လုပ်၍ သီဆိုပါ. Job Skills Need Practice and examine tasks from programs to interpret, discover …
Fish And Game Wardens Job Description / တာဝန်တွေပြီးတော့တာဝန်ယူမှုနမူနာ
Patrol designated location to avoid bass and sport legislation infractions. Examine stories of injury by animals to plants or house. Compile biological info. Job Skills Requirement Patrol issued areas by walking, or by vehicle, motorboat, လေယာဉ်ပျံ, indy to impose sailing guidelines, fish, or sport or to control animals plans, waters, …
အပန်းဖြေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
detect, စစ်ဆေးခြင်း, ညှိ, ပုံသေတပ်ထား, သို့မဟုတ် traveltrailers အပါအဝင်အပန်းဖြေယာဉ်များခေတ်မီ. ပရိုပိန်းဆက်ပြီးအတွက်ငှါ, ပါဝါပိုက်အထူးပြု,, သို့မဟုတ် frameworkPER တာဘိုင် restore ပြန်, ကရိယာ, နှင့်အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ကားဆွဲအစီအစဉ်များ. စိတ်ကြိုက်ဗန်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများလုပ်ဆောင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီပါရှိသည်. Career Skills Requirement Check or analyze function of pieces or systems to ensure …
စက်လမ်းခွဲပြီးတော့ Offbearers ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
ယာဉ်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာယောဘကိုဖျေါပွခကျြ၏ cleaners / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
ရေချိုးသို့မဟုတ်အခြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြောင်းအော်တို, စနစ်များ, နှင့်အခြား devices များ. စုတ်တံအေးဂျင့်အဖြစ်ကဤအစိတ်အပိုင်းများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ, ရေ , အထည်, နှင့်ရေပိုက်. Career Skills Need Areas that are inspect, devices များ, သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပတ်သက်. မော်တော်ယာဉ်, ဖျက်ဆီးခြင်း, နှင့်လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်ဒေသခံသုံးပြီး. သန့်ရှင်းသော, ခြစ်ပစ်, သို့မဟုတ်မှုန်ရေမွှား device ကိုဒေသများ, ထုတ်ကုန်, သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်, …
Diagnostic Medical Sonographers Job Description / အခန်းကဏ္ဍနှင့်ခံမှုနမူနာ
ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 6
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုထုံး Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
ဆေးသမားနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုသ၏လမ်းကြောင်းအောက်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကြောင်းကုသမှုပေး. Job Skills Need Utilize aerosol and respiration remedies inside the supply of breathing remedy or various oxygen gadgets or ventilators. တိကျသောစောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်ဒေသများတွင်အလုပ်, ကလေးအထူးကုသို့မဟုတ်မွေးကင်းစကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး, client များနှင့်အတူပါသို့မဟုတ်ဘေးဥပဒ်ကိုအခန်းပေါင်း, healing …
ဆေးဆိုင် Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty Template ကို
တစ်ဦးဆေးဝါးရဲ့လမ်းကြောင်းအောက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပြင်. ရောနှော, တွက်ချက်စေခြင်းငှါ,, ဝေးအားကိုး, နာမတျောကို, နှင့်ဆေးညွှန်းတောင်းဆိုမှုများနှင့်အညီဆေးဝါးများ၏ပမာဏနှင့်ဝေမျှမှတ်တမ်းတင်. Job Skills Qualification Get replenish requests or created prescribed and authenticate that facts is not incomplete and exact. ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်. သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအခြေအနေများသိမ်းဆည်းထားပါ. …
နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ-မန်နေဂျာများကယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှု Template ကို
ထိုကဲ့သို့သောတိပ်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများ Coordinate, ပြင်ဆင်ခြင်း, ဗိသုကာ, နှင့် servicing, လေလှိုင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သံ applications များအောင်, of technical departments. Career Skills Prerequisite Operation that is proper to be ensured by exam tools. Monitor shows to make sure that packages adapt to multilevel or station plans and laws. Notice pictures through direct …
စာမျက်နှာ 30 ၏ 99« ပဌမ...1020«2829303132 » 405060...နောက်ဆုံး »